Dowladda Soomaaliya oo shaacisay kiisas horleh oo ah fayruska Corona
Hoos u dhac ayaa laga dareemayaa dadka uu galaafanayo cudurka guud ahaan waddanka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasaaradda Caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay diiwaan-gelisay 58 kiisas cusub oo ah safmarka dilaaga ah ee Coronavirus.
Xaaladaha cusub oo lagu xaqiijiyey warbixinta maalinlaha ee wasaaradda ayaa laga kala helay; Benadir: 32, Hirshabelle: 11,Somaliland: 8,Galmudug: 3, Puntland: 2, Jubbaland: 1 iyo Koonfur Galbeed oo hal kiis ah.
Sidda lag soo xigtay warbixinta, bukaanadda cusub oo aanan gelin wax safar dibadd ayaa 49 waxay yihiin Rag, 9-na waa dumar.
Kiisaska cusub ee soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay kuna badan Muqdisho ayaa wadarta guud waxay ka dhigayaan 2,204.
Dhanka kale, warbixinta ayaa waxaa lagu caddeeyay in saacadihii lasoo dhaafay aysan jirin geeri horleh, balse waxaa bogsatay 13 bukaan.
Tiradda guud ee bogsashadda ayaa noqoneysa 418, halka geerida ay wali ku taagan tahay 79, maadaama aysan jirin dhimasho cusub.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa hoso u dhac laga dareemayay dhanka dadka uu galaafanayo caabuqa ee gudaha Soomaaliya, balse khuburadda waxay aaminsan yihiin in aan loo fasiran in cudurka uu kasii baxayo wadanka.
Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya oo ku dhow in ay gaaraan 1,500
Soomaliya 18.05.2020. 17:00
Tirada dadka uu galaaftay iyo kuwa ka bogsaday xanuunka guud ahaan dalka ayaa si lamid ah korortay.
Bixinta Baasaboorka Soomaaliya oo mar kale hakad la geliyey
Soomaliya 06.04.2020. 12:15
Kiisaska Covid-19 ee Soomaaliya oo dhaafay 1,800; geerida oo korortay
Soomaliya 28.05.2020. 18:15
Farmaajo oo balanqaad u sameeyay dhakhaatiirta ka hortaga Covid-19
Soomaliya 11.05.2020. 22:35
DF oo fahfaahisay bukaanada ku dhintay xarunta karantiilka Covid-19
Soomaliya 27.04.2020. 18:30
Muqdisho oo ay kasoo ifbaxeyso saadaalin cabsi leh lana xiriirta Corona
Soomaliya 19.04.2020. 07:45
Coronavirus: Soomaaliya oo kiiskii sadexaad laga helay "qof ajnabi ah"
Soomaliya 27.03.2020. 10:13
Tirada kiisaska fayruska Corona ee Soomaaliya oo dhaaftay 700
Soomaliya 03.05.2020. 17:25